Tokony hitsahatra tsy hiteny isika raha misy dikany | | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 29, 2012 Sabotsy, Desambra 29, 2012 Douglas Karr
Nahita azy indray aho androany… Lisitry ny Influencer 2012 iray hafa. Tsy afaka namakivaky ny lisitra iray manontolo anefa aho satria sahirana loatra nandrovitra ny hoho tamin'ny tavako ary nanintona ny voloko. Tsy lisitra nitaona olona mihitsy izany, lisitra malaza fotsiny. Mba hahazoana antoka fa fantatsika rehetra ny fahasamihafana, andao aloha hofaritana ireo roa:
Popular: Tiana, deraina, na ankafizin'ny olona maro na olona na vondrona iray manokana.
pahefana: Manana fitaomana lehibe amin'ny olona na zavatra hafa.
Ho anao mpivarotra any, misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa. Izany eyeballs mifanohitra amin'ny finiavana. Raha olona maro no tianao jereo ny entanao… mandehana mitady laza. Fa raha olona maro no tadiavinao mividy ny entanao… mitady fitaomana. Ny olona na marika malaza dia manana olona maro izay toy ny azy ireo. Ny olona na marika manana fahefana dia manana olona fahatokiana azy ireo.
Mbola tsy azonao ve? Ny iray amin'ireo renim-pianakaviana malaza indrindra tamin'ny 2012 dia i Nicole “Snooki” Polizzi. Ao amin'ny Twitter, Snooki dia manana mpanaraka 6.1 tapitrisa. Snooki dia manana isa Klout 88. Lohahevitr'i Snooki ampidirina ao ny sary, pizza, fanaova, ny miaramila, ary ny kiraro. Ny anaran'i Snooki dia mitovy dika amin'ny renim-pianakaviana amin'ity taona ity amin'ny lisitra maro.
Tsy isalasalana fa i Snooki dia malaza. Na izy na tsia pahefana azo iadian-kevitra amin'ireo lohahevitra ireo. Mety hijery an'i Snooki ny olona amin'ny endriny kiraro farany indrindra ny olona satria sary pop izy… saingy mampiahiahy izy fa hanampy amin'ny fitaomana ny hevitrao amin'ny fividianana fakan-tsary manaraka, fividianana pizza, fanontaniana amin'ny hery mitam-piadiana, fomba fahandro na ny fanontaniana momba ny fitaizan-jaza. Tsy mandondona an'i Snooki aho… milaza fotsiny fa malaza be i Snooki, saingy manana fitaomana mampiahiahy.
Ny olana dia ireto hery miasa mangina ny isa sy ny lisitra tsy tena misy fiantraikany mihitsy. Ny fametrahana an'i Snooki ho toy ny influencer dia tsy marina. Raha mila hevitra momba ny sary aho dia hitady Paul D'Andrea. Pizza? Handeha any amin'i James namako tompony aho Brozinni's. Baking? Ny mamako.
Azonao ny hevitra. Fa mahatsikaritra zavatra momba ireo olona nitaona ahy ve ianao? Tsy malaza izy ireo ary tsy manana mpanaraka na mpankafy an-tapitrisany. Matoky izy ireo satria nanangana fifandraisana manokana tamin'izy ireo tsirairay aho rehefa nandeha ny fotoana ary nahazo ny fahatokisako izy ireo. Tsy manambany aho fa ny olona malaza dia mety hisy fiantraikany… maro. Na izany aza, manisy fihenam-bidy aho raha te hanana fahefana, tsy maintsy malaza ny olona. Tsy izany no izy.
Amin'ny maha ohatra manokana ahy dia fantatro fa lasa aho pahefana eo amin'ny sehatry ny haitao marketing. Nanontany momba ny fahazoana vola mitentina 500 tapitrisa dolara mahery aho tato anatin'ny taona vitsivitsy ary nanome torolàlana tsara ho an'ny orinasa maro. Izany dia nilaza fa tsy malaza eo amin'ny habakabaka aho. Tsy ho hitanao aho ao amin'ny lisitra 10 ambony amin'ny lisitra be loatra ary tsy lohateny lehibe amin'ny haino aman-jery sosialy sy marketing aho. Mino aho, raha nifototra tamin'ny fitarihana sy ny fitokisana ny indostria dia ho ambony kokoa noho izany aho. Tsy fitarainana izany… fandinihana fotsiny.
Mila mitady fomba hanavahana tsara kokoa ny fitaomana sy ny lazany isika. Ireo mpivarotra dia mila mamantatra ireo influencers ary mampiasa vola amin'ny influencers hanampy amin'ny fizarana ny vokatra sy serivisin'izy ireo. Na izany aza, ny mpivarotra dia tokony hialana amin'ny fandaniam-bola amin'izay malaza fotsiny fa tsy misy fitaomana.
Tags: hery miasa manginapahefanamalazalaza
Mamolavola pejy momba ny vokatra ara-barotra mahomby
Dec 30, 2012 ao amin'ny 6: PM PM
Mihevitra aho fa mila sokajy fahatelo mihoatra ny "malaza" sy "manan-kery" izay "hita maso" fotsiny isika. Tsy hiady hevitra aho fa i Snooki no malaza indrindra (“tahaka, ankafizina na ankafizina”) tahaka ny fahitana azy tsotra izao.
Misaotra nizara, Doug!
Dec 30, 2012 ao amin'ny 11: PM PM
Douglas, araka ny efa hitanao, izahay ao amin'ny Little Bird dia mino fa ny lazan'ireo manampahaizana manokana momba ny lohahevitra dia proxy tsara amin'ny làlan'ny fitaomana, ny fahaizana manokana, sns.
Dec 31, 2012 amin'ny 5: 03 AM
Salama @marshallkirkpatrick: disqus! Little Bird dia manao asa lehibe toy izany amin'ny fanomezana refy isan-karazany amin'ny lohahevitra omena izay ahafahantsika mamantatra ireo mpanafatra. Na dia ao anaty akany aza dia misy ny loza ateraky ny fijerena laza fotsiny. Manontany tena aho raha misy fihetsika toy ny retweet, fizarana fanampiny sns ... izay manala ny fahafahan'ny olona mitaona olona iray hafa handray andraikitra. Nomena kaonty twitter roa - ny iray misy mpanaraka maro ary ny iray misy mpanaraka vitsivitsy fa ny retweet bebe kokoa - hifantoka amin'ilay farany aho.
Dec 31, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Douglass, misaotra nanoratra an'ity. Saingy izao aho dia tsy afaka nanontany hoe inona no dikan'izany:
omena lohahevitra izay ahafahanay mamantatra ireo olona nanery. ”
Mpandray anjara beta kely amin'ny vorona kely aho fa tsy hitako tsotra izao ho fitaovana mahasoa ho ahy. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampy amiko ary zavatra iray no hitanao amin'ity hevitra ity. Azonao atao ve ny mandinika hoe manokana kokoa izy? Misaotra indrindra.
Dec 31, 2012 ao amin'ny 11: PM PM
Salama @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: miaraka amin'i Little Bird, tiako ny zava-misy fa iray amin'ny sivana ny hetsika ary azoko atao ny mampitaha ny hetsika, fihainoana ary ireo mpitarika lohahevitra manohitra ny tsanganana be mpanaraka indrindra. Tsy mamokatra lisitry ny influencer eo noho eo izy io, fa ahafahako miverina miverina ary manao fandalinana bebe kokoa momba ireo kaonty.
Lazaina ny marina, tsy fitaovana manosika ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity ny fitaovana toa an'io. Ireo lisitra Top Influencer tsy misy dikany ho an'ny 2012 no nanosika ahy. Mankasitraka ireo fitaovana toa an'i Klout, Appinions ary Little Bird aho - izay manandrana mamolavola ny algorithma hanome valiny tsara kokoa. Olana sarotra be io!
2 Jan 2013 amin'ny 3:53 PM
Douglas - Mahafinaritra ny mahita anao mbola manangan-tsaina amin'ity olana ity. Nandany fotoana nanandramana nampianatra ny olona an'ity lohahevitra ity izahay. Topazo maso ny horonantsary novokarinay vao haingana izay manohina ny fonao. http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ Tohizo ny asa tsara.